Munaasabadda Maalinta Ciidul Adxa oo si weyn looga Ciiday Magaalada Zürich iyo wadanka Switzerland oo idil. | JILYAALE_ONLINE
Munaasabadda Maalinta Ciidul Adxa oo si weyn looga Ciiday Magaalada Zürich iyo wadanka Switzerland oo idil.
Munaasabadda Ciidul Adxa, ayaa maanta waxaa si isku mid loogu wada Ciiday dhammaan wadamada Caalamka Islammka iyo wadamada kale oo Islaamka ku yar yahayba, balse waxaa xusid mudan in gobollada dalka Soomaaliya oo idil laga dareemay mid ahaansha Diineed ee dadka Soomaaliyeed, waxayna Ciidan noqtay mid si reynreyn iyo Farxad leh loogu wada Ciiday dalka dhan oo ay ugu horreyso Caasimada Muqdisho.
Wararka iska soo daba dhacaya ee la xiriira Farxadda Ciidul Adxaga, ayaa sheegay in maanta laga wada Ciiday Muslamiinta ku nool Wadamada Reer Yurub.
Sidoo kale Muslimiinta ku nool Magaalooyinka waaweyn ee dalkan Switzerland oo idil ayaa si weyn looga dabaaldegay ciidul Adxaga sida: Magaalooyinka Zürich, Berna, San Gallen, Lausanne, Jeneve iyo kuwa kaleba.
Muslamiinta ku nool Magaalada Zürich ayaa Saakay u dareereen degmada Affoltern ee hoos timaada magaalada Zürich, halkaas oo lagu ballansanaa in si wada jir ah loogu Tugto Salaada Ciidul Adxa, sidaas awgeed, Muslamiin Kanton Zürich, iyagoo isku duuban yar iyo weyn, Rag iyo Dumar ayaa si farxad iyo reynreyn ah ugu wada ciideen goobta loogu talagay inay ku kulmaan.
Balse halkaas waxaa ka maqanaa farxaddii Caruurta oo horay loo baray inay si reynreyn ah uga Ciidaan, Caruurta ayaa lama fillaan ku noqotay inay waayaan wixii kal hore ay uga barteen maalmaha Ciida oo ay Diin ahaan iyo dhaqan ahaanba u lahaayeen.
Si kasta ha u dhacdee arrinta, waxaa hubanti ah in waalidiin badan ay caruurtooda weydiyeen Su’aasha ah Aabe aawey meeshii aan ku ciyaari jirnay`? Maxaa dhacay maanta waa Ciideenna !! ayey ka daba Su’aaleen Caruurta, hase yeeshee Su’aasha rasmiga ah waxay tahay Yaa ka mus’uul ah dhacdadan ma guddiga Maamulka sare ee Jaaliyada Muslimka ee Kanton Zürich, mise Waaladiinta ayaa howlaha arrintaas ka seexday.
Inkastoo ay jireen Su’aalo kale oo ay isweydiinayeen qaar ka mid ah dadweynihii u soo Tukasho tagay ee la xiriira Hoolka lagu tukanay iyo sida dhaqsiyaga loo dedejiyey Salaada Ciida Adxaha, haddana waxaa jiray dad kale oo u mahad celinayey Maamulka Sare Muslamiinta Kanton Zürich. Sida ay isugu soo dubarridka Barnaamijka Ciidul Adxa.
Gabagebadii Muslamiinta ka soo qayb gashay Farxadda Ciida ayaa waxay is dhaafsanayeen Tahniyado, iyago midba mid kale u rajeeynayey in sandkan, sanadkiisa ay dhammaan Muslamiinta meel kasta ay joogaan .caafimaad qab ku gaaraan.
← Gobollada iyo Degmooyinka dalka Soomaaliya oo Maanta si isku mid ah looga Tukaday Ciida Barakeysan ee Ciidul Adxa.
Sidee Looga Ciiday Dalka koonfur Afrika?‏ →